Warshad soo saarista gadaal - Shiinaha Soosaarayaasha Loader, Alaab-qeybiyeyaal
Astaamaha qaabdhismeedka ugu muhiimsan iyo tikniyoolajiyadda horumarsan ee loo adeegsaday WIK388T backhoe loader
WIK 388 Dhajiyaha gadaal gadaasha wuxuu isku daraa labada mashiin ee qodista iyo rarka. Waxay leedahay dhammaan shaqooyinka qodista iyo rarka. Hal mishiin wuxuu leeyahay shaqooyin badan, waa mid ku habboon oo rogrogmi kara, wuxuuna yareeyaa qiimaha wax iibsiga iyo kharashka isticmaalka mashiinka oo dhan. Ikhtiyaar Deutz, Cummins iyo matoorro kale oo caan ah iyo nidaamka gudbinta Carraro Talyaani ah. Waxaa lagu qalabeyn karaa qalab injineernimada kaabayaal kala duwan sida jabiyaha, daloolinta barroosinka dhulka, biriijka gariirka, iwm.
isagu waa astaamaha qaabdhismeedka ugu muhiimsan iyo adeegsiga tikniyoolajiyadda casriga ee WIK30-25 Backhoe loader
WIK Qalabka gadaal gadaalku wuxuu isku daraa labada mashiin ee qodista iyo rarka. Waxay leedahay dhammaan shaqooyinka qodista iyo rarka. Hal mishiin wuxuu leeyahay shaqooyin badan, waa mid ku habboon oo rogrogmi kara, wuxuuna yareeyaa qiimaha wax iibsiga iyo kharashka isticmaalka mashiinka oo dhan. Ikhtiyaar Deutz, Cummins iyo matoorro kale oo caan ah iyo nidaamka gudbinta Carraro Talyaani ah. Waxaa lagu qalabeyn karaa qalab injineernimada kaabayaal kala duwan sida jabiyaha, daloolinta barroosinka dhulka, birqaya gariirka, iwm. Badeecadani waa w ...